म भोलि फेरि जन्मनेछुु ! कला क्षेत्रलाई जोगाउन पहिला त कलाकार शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्छ। तर, यो बन्दाबन्दीले मानसिक तनावमा परेका कलाकारहरू पेशा र देशबाटै पलायन हुनसक्ने खतरा बढेको छ।
कृषिप्रधान बजेटको विकल्प छैन महामारी बीच आउने यो बजेट कृषि र स्वरोजगार केन्द्रित हुनुपर्छ । ‘विदेश नजाऔं, आफ्नो देश आफैं बनाऔं’ भन्ने उक्तिलाई नारा बनाउनुपर्छ ।
महामारीपछि पनि ‘अनलाइन शिक्षा’ महामारी सकिएला तर हामीले आज थालेको अनलाइन कक्षाको अभ्यास छाड्नुहुन्न । अनलाइन र भौतिक दुवै कक्षालाई मिश्रण गर्दै डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि बढाउनुपर्छ ।
‘रोग र भाेकबाट बच्न बलियो स्थानीय सरकार’ रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउन कृषि र पशुपालनमा अबको बजेट केन्द्रीत हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति कृषि बजारको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ । दुखका साथ भन्नुपर्छ– हामीले गाउँगाउँमा उत्पादन भएका तरकारीहरु सडेर गइरहेको छ । खासगरी भारतबाट आएको तरकारी खानु परेको छ ।
सँगै नजाउँ भो ! व्यक्ति एक्लो जन्मिन्छ, एक्लो नै देहत्याग गर्छ। मानवीय चेतनाले जन्म, मृत्यु आदि संस्कार बनाए होलान्, तबदेखि यो प्रक्रिया निरन्तर छ। प्रसंग कोरोनाभाइरस र बन्दाबन्दीकै हो । तर, अलि पुराना घटना स्मरण गरौं।
पेरिसको पत्रः आफू र प्रियजनको ख्याल गर्नुहोला केही दिन अगाडि एउटा नयाँ इमेल आएको रहेछ, वेलकम होटेल पेरिसबाट । म गत जुलाईमा उक्त होटेलको पाहुना भएर केही दिन बसेकी थिएँ ।
कोरोनाभन्दा खतरनाक ‘पितृसत्ता भाइरस’ अहिले संसारलाई कोरोनाभाइरसको महामारीले हल्लाएको छ । तर, एकछिन सोच्नुस् त, युगौंदेखि समाजमा जरा गाडेको ‘पितृसत्ता भाइरस’ले समाजलाई कति क्षति पुर्‍याइरहेको होला ?
'हेलो ज्ञानेन्द्र, हेलो पिटर!' बाटोमा भेट्दा पनि मैले “हेलो ज्ञानेन्द्र” भनेरै बोलाउँथे, उनले पनि ‘हेलो पिटर !” भनेर फर्काउँथे । तर नेपालका नेवारहरूले भुइँमै लेटेर ढोग गर्दा चाहिँ ज्ञानेन्द्र तर्सेझैँ उम्कन्थे र भाग्थे ।
बन्दाबन्दी: माटोको सुगन्ध पहिल्याउँदै फर्कनेहरूका नाममा दार्शनिक भोल्तेरको एउटा कथन– "१०० मुसाहरूद्वारा शासित शासनभन्दा एउटै सिंहद्वारा शासित शासनमा रहन ठीक । हामीले अझै पनि देश हाँक्न सक्ने सिंह जस्तो नेता पाएनौं । सिंह आफ्नो निर्णयमा निश्चित हुन्छ । तर, मुसाहरू हल्ला र फोहोर मात्रै गर्छन् । उनीहरू कसैलाई मार्नुपर्‌यो भने पनि एकैचोटि मार्दैनन् । बरु जिस्क्याई–जिस्क्याई टोकेर मार्छन् । "
प्रेमिल लाग्दैछ यो बन्दाबन्दी बाहिर निस्किएर यसो हेरेको घाम अस्ताउन लागेछ । अब त बिर्सन थालें, साँच्चै बन्दाबन्दी भएको आज कति दिन भयो ? गते थाहा छैन, तर आज शनिबार रहेछ । हिजो राति अबेरसम्म निद्रा लागेन । मनमा कुरा खेलिरह्यो।